Hawadii Somaliland…. Cidlaa la kaxaystee miyaa cudud la ii sheegtay. Bal isha mari Qoraalkan aan ka qoray hawda Somaliland sanadkii 2011. Kulmiye Wadanka hal sano ayuu haystay markaa. | Salaan Media
Hawadii Somaliland…. Cidlaa la kaxaystee miyaa cudud la ii sheegtay. Bal isha mari Qoraalkan aan ka qoray hawda Somaliland sanadkii 2011. Kulmiye Wadanka hal sano ayuu haystay markaa.
December 24, 2020 | Published by: Hamse
Hawadii Somaliland…. Cidlaa la Kaxaystee Miyaa Cudcud la ii Sheegtay. Bal isha mari Qoraalkan aan ka qoray hawda Somaliland sanadkii 2011. Kulmiye Wadanka Hal Sano ayuu Haystay markaa.
60 Duulimaad Oo Dulmara Hawda Somaliland Iyo 30 Duulimaad Oo Dulmara Hawda Somalia Waxa ka soo Hoyada Maalin Walba Lacag Gaadhaysa 24,750 Dollar….Lacagtaas Xagee Ayey ku Dhacdaa, Waxse Ma Ka Soo Gaadhaan Somaliland?
Aqoonsi La’aanta Somaliland Curyaamisay iyo Dagaalada aan dhamaadka lahayn ee Somalia ka socdaa waxa ay horseed ka yihiin in khayraadkii dabiiciga ahaa iyo hawdii labada dal-ba si fool-xun oo sharciga caalamiga ah aan waafaqsanayn loo boobo looguna xad-gudbo. Maskaxda fayaw ee xisbaatamaysa waxa u soo baxaaya marka ay Is-weydiisu Aqoonsi la’aanta Somaliland iyo dagaalada lagu halaagmay ee Somalia ka socda in dano fog oo shisheeye leeyahay ay dabada ku hayaan. labada dal magacyadoodu waxa ay noqdeen qalab lagu dawarsado oo dunida lagu soo baadho, Hantidoodii dabiiciga ahaydna waxa ay noqotay baylah la boobo.
Sida ku cad War-bixin dhawaan lagu daabacay Wargayska Caanka ah ee New York Times ayaa ahayd in laga helo lacag gaadhaysa dhawr Million oo Dollar duulimaadyada adeegsada hawda Somaliland iyo Somalia.
International Civil Aviation Organization [ICAO] iyo Maamulka Hawada Somaliland iyo Somalia
Burburkii ku habsaday dalkii la isku odhan jiray Somalia, waxa uu keenay in UN-tu iyo Hay’ada shisheeya ay gacanta ku dhigaan Obocdii iyo Uur-ku-jirtii Somaliland iyo Somaliya-ba. Muddo iminka laga joogo 15 sano ayey UN-tu maamulaysay hawada Somalia iyo Somaliland, waxaana uga wakiil ah hay’ada la yidhaadhdo International Civil Aviation Organization ICAO. Hay’adaani waxay xafiisyadeeda ku yaalaan Nairobi halkaasoo si dhib yar ay ugala socdaan dhaqdhaqaaqa dayaaradaha ganacsiga ee dul mara Somaliland iyo Somalia oo ay ku jiraan kuwa u kala goosha dunida inteeda kale iyo kuwa ku soo jeeda labada dal gudahooda.
Hay’adan waxaa hadda gudoomiye u ah Raymond Binjamin oo haysta dhalashada Faransiiska. Hay’ada ICOA waxay shaqaalaysiisay dad aan Somaliland iyo Somalia midna ka soo jeedin , kuwaasaoo mushahar fara badan ay ku siiso hawsha ilaalinta hawada Somaliland iyo Somalia, kumana jiraan dad Soomaaliyeed.
International Civil Aviation Organization [ICAO] ma jiraan garoono Somaliland ku yaala oo ay si fiican u dayactirtay ama qalabaysay, haddii ay jiraana waxa ka jawaabi doona wasiirka Duulista iyo Hawda Mr. M. Haashi, Mana filaayo iyana in ay jirto wax Xisaab ah oo ay isku hor fadhiisteen Hay’adaas iyo Dawladihii soo maray Somaliland.
Yaa u Dhiibay Hay’ada ICAO Maamulka Hawada Somaliland Iyo Somalia?
Waxaa muhim ah in la isweydiiyo qaabka ay hay’adan ku la wareegtay hawadii dalkii la isku odhan jiray Somalia, Ka dib burburkii dawladii dhexe ee Somalia Sanadihii 1990-meeyadii ayaa dalka Soomaaliya waxaa soo galay ciidamo caalami ah oo ku hawlgalayey magaca UNISOM kuwaasoo u yimid hawlgalkii loogu magac daray rajo soo celinta ‘Restore hope mission’ kaasoo ay hogaaminaayeen ciidamadii Maraykanku. Hawlgalka UNISOM wuxuu markaas si ku meel gaadh ah ula wareegay garoomadii iyo dekedahii dalka oo dhan si ay dalka u xasliyaan. Hay’ada ICAO oo ka mid ahayd hay’adaha hoostaga UN ayaa iyana qaadatay hawshii hawada sare ee Somalia ‘Somalia airspace” iyadoo xafiiskeedii ugu horeeyey ka furatay Muqdisho.
Markii uu fashilmay hawlgalkii UNISOM ee ay dalka ka bexeen 1995-kii, waxay hay’ada ICAO u guurtay Nairobi si ay halkaasi hawsha uga sii wado. Dabcan si dhaqaalaha hawada Somaliland iyo Somalia ka soo hoyanaayey uu halkii ugu sii socdo. Mana jirto cid Somaliland ah am Somalida koonfurta aha ah oo illaa waagaas wax talo ah laga weydiiyey arinta maamulka hawada Somaliland iyo Somalia iyo waliba dhaqaalaha ka yimaada.
Lacagta ka soo Hoyata Hawada Somaliland Iyo Somalia Waa Intee?
Warbixinta New York Times waxay ku qiyastay boqolaal million oo dollar, balse New York Times waxay sheegtay intii loo sheegay oo kaliya, waxaana xaqiiqo ah inay ka badan tahay lacagta ka timaada hawada Somaliland iyo Somalia.
Qiyaas ahaan maalintii waxaa hawada Somaliland soo gala 60 duulimaad, dhinaca Somalia-yana 30 duulimaad isugayn waa 90 duulimaad oo isugu jira kuwo gudaha labada dal-ba kuwa iyo kuwo caalami ah.
Dayaaradaha maalin walba hawada Somaliland mara ee aan ka maarmin waxaa ka mid ah kuwo caan ka ah adduunka sida:-
– Diyaarada Air France (from Paris to Réunion) – waa maalinle
-Diyaarada Emirates (from Dubai to Johannesburg) – waa maalinle
– Diyaarada El Al (from Tel Aviv to Thailand) – waa maalinle
Halkii duulimaad waxaa laga qaadaa lacag gaareysa $275. sidaasi awgeed $275×90 duulimaad waa $ 24, 750 halkii maalin oo kaliya. (Sanadkii waxay lacagtaasi gaadgaysaa $ 8,910,000) Lacagtaas oo illaa hadda aanay hay’ada ICAO meelna ku sheegi karin.
Xilligii uu Somalia ka talinaayey Kaligii-taliyihii Siyaad Barre waxaa hawada Soomaaliya ka soo xeroon jiray lacag gaadhaysa 4 million oo Dollar sanadkiiba, waa muddo iminka laga joogo dhawr iyo labaatan sano (sida ku xusan dukumintiyadii hay’ada duuliimadka Soomaaliya, waxaana sheegay arintaa saraakiishii hore ee duulimaadyada Somalia ka shaqayn jiray).
Dhaqaalaha ka soo Xerooda Hawada Somaliland Iyo Somalia Xagee Ayuu Ku Danbeeyaa?
Warbixino fara badan ayaa ka soo baxaya qaabka foosha xun ee dhaqaalahan loo maareeyo, mana jirto wax la tilmaami karo oo soo gaadha labada dal. dhaqaalahani waxa uu u ku kala baxaa sida soo socota:-
1- Kirada guryaha, xafiisyada iyo baabuurta qaaliga ah ee International Civil Aviation Organization ka kireysatay Nairobi.
2- Shaqaalaha ajaaniibta ah ee uga shaqeeya xafiisyadeeda Kenya iyo meelaha kale.
3- Saraakiil QM ka tirsan waxay si hoose u carabaabeen in dhaqaalaha ku baxa UN-ta xafiisyadiisa Nairobi laga helo hawada Somaliland iyo Somalia.
4-Qayb badan oo lacagta ah ma xisaabsana, waxayna ku maqan tahay madaxda hay’ada oo hadba kii ka dherga uu shaqada iskaga tago mid kalana lagu soo bedelo.
Ra’iisal Wasaare Farmaajo Oo Dacwad Ku Soo Oogay Ha’yada International Civil Aviation Organization Oo Doonaaya In Lagu Wareejiyo Maamulka Hawada Somaliland Iyo Ka Somaliya-ba.
Xukuumada KMG Soomaaliya ee uu Ra’iisal wasaaraha ka yahay Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u dalabatay in UN-tu ay ku soo wareejiyaan maamulka hawada sare ee Soomaaliya oo hadda dhaqaalaha ka yimaada uu gacanta u galo Qaramada Midoobay, waa sida uu soo qoray wargeyska New York Times.
Ra’iisal wasaare Farmaajo ayaa u gudbiyey masuuliyiinta UN-ta in xukuumada Soomaaliya ay masuul ka tahay hawada dalkeeda sidaa darteed wixii hadda ka danbeeya ay iska soo wareejiyaan maamulka hawada.
“Waa dhab waan u dacwooneynaa maamulka hawadeena, waana arin fudud waayo Soomaaliya waa dal madax bannaan”, ayuu wargeysku ka soo xigtay Mr. Farmaajo.
Ra’iisal wasaaruhu wuxuu sheegay in DKMG ay codsi u dirtay saraakiisha UN gaar ahaan hay’ada hadda maamusha hawada sare ee la yidhaahdo “International Civil Aviation Organization” taasoo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya.
Mr. Farmaajo wuxuu sheegay in dawlada dalka ay masuul ka tahay wax kasta oo khuseeya qaranimadeeda sidaasi awgeedna wixii hadda ka dambeeya waa in UN-tu iska wareejiyaan maamulka hawada dalkayaga.
Warar kala ayaa sheegaya in arintan ay dood ka keeneen saraakiil ka tirsan hay’ada International Civil Aviation Organization kuwaas oo macaansaday lacagaha malaayinka doolar ah ee ka soo gala hawadan la bililiqaystay.
Sida cad saraakiisha UN-tu waxay ku marmarsoodeen in Somaliland aanay Aqoonsi Caalmiya haysan, Soomaaliyana hadda aanay ka jirin dawlad rasmi ah sidaasi awgeedna aan lagu aamini karin maamulka hawada dalalkooda.
“Xataa haddii ay Dawlada KMG ee Somalia ay doonayso in lagu wareejiyo maamulida hawada sare waa in ay haysata dhamaan tasiilaadkii oo ay diyaarisaa”, sidaasi waxa wargeysku ka soo xigtay Denis Chagnon oo ah afhayeenka International Civil Aviation Organization oo ah hay’ada maamusha hawada Soomaaliya tan iyo 1996-kii.
“Waa arin xasaasi ah oo ku jahaysan badbaadada dayaaradaha iyo amaanka guud”, ayuu hadalkiisa sii raaciyey afhayeenkaasi u hadlay hay’ada.
Sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan UN-ta ayaa waxay ku doodeen in Soomaaliya ay xilligan ka jirto DKMG ah taasina aan waxba lagu wareejin karin iyagoo sababta ku sheegay in loo baahan yahay dawlad dhexe oo rasmi ah.
“Dawlada KMG Soomaaliya wax kasta way isbedelayaan shaqaalaha xitaa isbedelaya waa waxa aan xalka u raadineyno arinta KMG ah”, ayuu yidhi Alvaro Rodriquez oo sida uu sheegtay ka soo shaqeeyey arimaha Somalia.
Waxaa iyana la yaab leh hadal uu wargeyska New York Times ka soo xigtay diblomaasi reer Galbeed ah oo magaciisa qariyey kaas oo yidhi “Soomaalida waxay doonayaan wax xoogaa lacag ah [pocket money] haddii ay helaana way iska tagayaan” isagoo dooda DKMG ah ku micneeyey mid lacag doon ah!!!.
Gabagabo: Sida ku cad Qoraalkan……Shariif-ka iyo Mr.Farmaajo Cidiyaha ayey ku dagaalamayaan oo waxa ay doonayaan in ay soo dhacsadaan Xaqooda, ka Somaliland-na ku darsadeen. Su’aasha u baahan in la Is-weydiiyo waxa ay tahay Maxa uga Qorshaysan Arintan Xasaasiga ah dawlada Somaliland. Runtii waan jeclaanlaha in maqlo ama Arko Saaxiibka Mohamoud. Xaashi Cabdi (Wasiirka duulista iyo Hawda ee S/land) oo kor u Faytay…Guntigana Dhiisha iskaga dhigay si uu u soo dhiciyo Hawada Somaliland. Waxaan kula talinayaa Wasiirka marka uu arintan gelaayo in uu Xog badan raadiyo oo uu hawl galiyo khubaro Garyaqaano ah oo ku takhasustay Arimaha noocan ah.
By: Osman Abdillahi Sool……Freelance Journalist. sooldhuub@hotmail.com
Falanqayn: Sidee La Isku Waafajin Karaa Muddo Kordhinta Guurtidu Samaysay Iyo Wakhtiga Doorashada?
Daawo:Siyaasi Maxamed Cumar Carte Oo Ka Qayb Galay Shaacinta Musharaxnmada Prof Craxmaan Shunuuf.
Daawo:Cabdiwahaab Maax oo ka socday sharikadda Telsome Muxu Ka Yidhi Shirka Maalgashiga Jigjiga..
Deg Deg:Dawlada Federaalka Somaliya Oo Fasaxday Dhamaanba Qaadkii Dalka Imanayay
Daawo:Qaar Ka Mid Ah Masuuliyiinta Ka Soo Qayb Galay Shirka Maalgashiga DDS Oo La Hadlay Qaar Ka Mid Ah Warbaahinta
Gabiley:Maayarka Magaalada Gabiley Oo Shaaciyay In Uu Markale U Sharaxanyahay Doorashada Golaha Deegaanka
Jabhadii Soo Weerartay XFS 100 Maxbuus Ayaanu Ka Qabanay “Wasiirka Warfaafinta XFS”
Qarrax Lala Eegtay Ciidamo Ka Tirsan Dawlada Federaalka Somaliya
Jig-jiga:Shirka Maalgashiga Ee Dawlad Degaanka Somalida Oo Si Rasmiya Uga Furmay Magaalada Jig-jiga
Agaasimaha Guud Ee Wasaarada Shaqo-Gellinta JSL Oo Furey Kulan Ku Saabsan Shuruucda Caruurta